Margarekha जहाँ कुकुर र मान्छेबीच कुनै फरक छैन – Margarekha
जहाँ कुकुर र मान्छेबीच कुनै फरक छैन
जसरी कुकुरको बच्चा जन्मन्छ, त्यसरी नै जन्मियो । यही फ्लाइओभरमूनि, ब्लेडले हामीले साल–नाल काट्यौँ । अरु के…. ?’
यो घटना सुनाउने महिला २ महिनाअघि जन्मिएको बच्चाकी हजुरआमा हुन् । घरमा बच्चाको जन्म हुँदा हजुरआमा जत्तिको खुसी अरु को होला ? तर, यी महिला आफ्नै नातीबारे किन यस्ता शब्द ओकल्दैछिन् ।
नजिकै बसेकी एक महिला उठेर बोलिन् , ‘हामी र कुकुरमा थोरै मात्र अन्तर छ । जहाँ हामी सुत्छौँ, त्यहीँ कुकुर पनि सुत्छ । हाम्रो खाना खाने थालमा मुतेर हिँड्छ । सुतेका बेला मुखमै मुत्छ । हामीहरु त्यसलाई लात हानेर धपाउँछौं । हामीलाई ठूला मान्छेले त्यसरी नै धपाउँछन् ।’
यो सबै पढेपछि धेरैलाई पक्कै शंका लाग्नेछ, हामी कुन चाहीँ दिल्लीमा बसिरहेका छौँ ?
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एउटा त्यस्तो तप्का छ, जो यमुना नदीको किनारमा सुत्छ । त्यही यमुना नदी, जसको किनार हुँदै यात्रा गर्नेहरु दुर्गन्ध नआओस् भनेर रुमालले नाक छोप्छन् ।
घाम अस्ताउन थालेपछि बल्ल यहाँ नदी किनारमा चहलपहल शुरु हुन्छ । मानिसहरु आउन थाल्छन् र खाली रहेको स्थान विस्तारै भरिन थाल्छ । त्यसपछि खुला जमिनमा सुत्नका लागि हिसाब शुरु हुन्छ । मानिसहरुले बिहान जुन ढुंगाको मुनि आफ्नो ओछ्यान लुकाएर गएका हुन्छ । त्यही ढुंगा हटाउँछन् । ओछ्यान झिकेर बिछ्याँछन् र सुत्छन् ।
जो कहिल्यै जुत्ता खोल्दैनन्
नचिनेको मान्छेको पाइलाको आवाज आयो भने सयौँ कुकुरहरु भुक्न थाल्छन् । मानौं, उनीहरुले भनिरहेका छन् – बिचराहरुलाई यहाँ त सुत्न देऊ ।
यस्ता सुकुम्बासीहरुका पक्षमा काम गर्ने स्थानीय व्यक्ति शैलेन्द्र पटेल यी व्यक्तिहरुमध्ये धेरैले कहिल्यै जुत्ता नफुकाल्ने बताउँछन् । दिनमा काम गर्नका लागि र राती जाडोबाट बच्नका लागि उनीहरु जुत्ता लगाउन बाध्य छन् । ‘यमुना माईले नै यी व्यक्तिहरुलाई पालिरहेकी छिन् । यिनीहरु जुन पानीले दिसा धुन्छन् । त्यही पानीले नै कुल्ला गर्छन् । ओछ्यानलाई ढुंगाले किच्छन् र काममा हिँड्छन् । यसरी नै लामो समयदेखि उनीहरुको गुजारा चलिरहेको छ ।’
नदी किनारबाट थोरै माथि आइपुगेपछि पीब्ल्यूडीको एक शान्दार बिल्डिङ भेटिन्छ । अलि तल पुगेपछि गाई, कुकुर, गोबर,फोहर र पिसाब राखिएको ठाउँमा बोरामा सुत्ने मानिसहरु ।
किनारबाट केही माथि आएर बाँया मोडिएपछि दृश्य बदलिन्छ । केही मानिसहरु सोफामा बसेर टिभी हेर्दै गरेको देखिन्छ । सोधेपछि थाहा हुन्छ, यो रात बिताउनका लागि तयार गरिएको सरकारी सेल्टर हो ।
दिल्लीको व्यस्त चाँदनी चोक र आईएसबीटी इलाकामा झन्डै ३० देखि ३३ को संख्यामा यस्ता सेल्टर छन् । स्थायी, अस्थायी र टेन्टगरी तीन किसिमका यस्ता सेल्टरमा पुरुषका लागि अलग, महिलाका लागि अलग र बृद्ध–बृद्धाका लागि अलग–अलग सुत्ने प्रबन्ध गरिएको हुन्छ ।
डीयुएआईबीका विपिन रायका अनुसार दिल्लीमा यस्ता २ सय ५८ वटा सेल्टर छन् । त्यसमध्ये पक्की घर ८३, अस्थायी ११५ र टेन्टको संख्या ७० छ । यमुना किनारमै रहेको यस सेल्टरमा केही सुविधा उपलब्ध छन् । जस्तो, खाट, कम्बल, पानी, शौचालय, उपचार र हरेक बिहान जलपानको व्यवस्था । यस्ता सेल्टरमा महिला र बच्चाको विशेष हेरचाह हुने गर्छन् । विपिनका अनुसार सेल्टरमा बस्ने चाहनेहरुको संख्या धेरै भएपनि सेल्टरले धान्न सक्ने अवस्था छैन । यसको स्थायी समाधान निकाल्न जरुरी छ
सेल्टरका केयरटेकर राजवीर जाधवका अनुसार सेल्टरमा बस्न चाहनेले आफ्नो बाबुको नाम, स्थायी ठेगाना र आफ्नो नाम लेखाए पुग्छ । सेल्टरमा बस्नका लागि पहिचान खुल्ने कागज जरुरी छैन । तर, आफ्ना सामानहरुको चेकजाँच गराउनुपर्ने हुन्छ ।
निजामुद्दीन पुलबाट थोरै पर रहेको अर्को सेल्टरको कथा फरक छ ।
यहाँ पनि ३ वटा सेल्टर छन् । ती सेल्टरमा कुल ५० देखि ६० जना बस्छन् । दुधे शिशुहरु बोकेका महिलाहरु पनि यहाँ बस्छन् । अधिकांश मुसलमानको बसोबास छ ।
यहाँ बस्ने यास्मिन भन्छिन्,’ अन्त कतै बस्न सकिएन । त्यसैले यहाँ बसेका छौँ । शौचालयदेखि हरेक कुराको समस्या छ । सेल्टरमा थुप्रै किसिमका मानिसहरु बस्छन् । डर पनि लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर अरु केही साहारा पनि त छैन । सडक किनारमा बसौँ भने बच्चाका कारण डर लाग्छ । त्यहाँ न बत्तीको व्यवस्था छ न कुनै औषधि उपचारको ।’
यहीँ एउटा सेल्टरमा सल्मा बस्छिन् । उनी तीन सन्तानकी आमा हुन् । तेस्रो शिशु जन्मिएको २ महिनामात्रै भयो । उनले सडकमै बच्चा जन्माएकी थिइन्, फ्लाइओभरको मूनी । उनीसँगै बसेकी महिलाहरुले बच्चाको सालनाल काटे । त्यसपछि उनी यस सेल्टरमा आइन् ।
‘यहाँ दुख छ । खानाको अभाव छ । औषधि पनि छैन, ’ सलमाले भनिन्,’ तर के गर्ने बच्चालाई लिएर अन्त जान पनि त सकिदैँन । कमसे कम यहाँ सुत्न त पाइन्छ ।’
सेल्टरमै बस्ने आठ महिनाकी एक गर्भवती महिलाले आफ्ना समस्या रुँदै सुनाइन् । ‘कसैलाई हाम्रो चिन्ता छैन । कहिले पेट दुख्छ । त कहिले बिरामी हुन्छौं । तर औषधि दिने कोही छैन ।’
एनजिओमा काम गर्ने सुनिल नामक एक व्यक्ति दिल्लीका कुनै पनि सेल्टर मापदण्ड बमोजिम नरहेको बताउँछन् । हरेक सेल्टरमा मानिसहरुको संख्या बढ्दो छ । सरकार राखेको मापदण्ड अनुसारको सेवा–सुविधा भने उपलब्ध हुँदैन ।
कबाडीको काम गर्ने जमद अली भन्छन्,’ मेरी छोरी १६ वर्षकी भइन् । ऊ सेल्टरमा बस्छे । एक छोरा पनि छ जो थोरै पागल छ । जब म बाहिर निस्कन्छु तब मलाई यो सम्झेर डर लाग्छ कि मैले आफ्नी छोरीलाई दर्जनौं व्यक्तिहरुको भीडमा असुरक्षित छाडेर काममा निस्किएको छु ।’
२८ पुष २०७४, शुक्रबार २१:०९ प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी
लुम्बिनी प्रदेश कै पहिलो साहसिक जल यात्रा राप्ती नदीमा (र्याफ्टिङ) काे लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरीले उदघाटन
कर्णाली प्रदेशकाे राजधानी बिरेन्द्रनगरमा कर्फ्यू